Eric Raymond anoti Windows 10 ichave iri dura reLinux kernel | Linux Vakapindwa muropa
Eric S Raymond Iye munhu wekare anozivana naye munyika yekubiridzira uye yakavhurwa sosi. Kunyangwe iye aida kutora chikamu mukusimudzira kweLinux kernel uye kodhi yake yakarambwa, hazvifanirwe kukanganikwa kuti ndiye musiki wemabasa akadai Iyo Cathedral uye iyo Bazaar. Uye nhasi haisi nhau kune chero ipi yeizvozvo, asi kune zvimwe zvirevo zvaakaita munguva pfupi yapfuura nezve Windows 10 neLinux.
Uchaziva WSL (Windows Subsystem yeLinux), ndiko kuti, denderedzwa rekuenderana rakagadzirwa neMicrosoft kuti ikwanise kumhanyisa Linux software natively paWindows 10 uye Windows Server 2019. Chirongwa chakavakirwa paWindows Subsystem yeApple inozivikanwa seProjekiti Astoria yeWindows Mobile. Iyi purojekiti yakashanduka uye parizvino inotsigira kunyangwe graphic maapp ...
Zvakanaka, Eric S. Raymond anofunga zvakanyanya kuti kuchave neimwe mhando ye "LSW" kana Linux Subsystem Windows. Ndokunge, inoenderana dhata yekumhanyisa yemuno Microsoft Windows software pane Linux kernel. Chinhu chakatotarisirwa neWine, asi chakabatanidzwa pane kernel pachayo seWSL.
Eric S. Raymond anofunga izvozvo hazvizotora nguva yakareba kuti izvo zviitike. Kudzoka muna 2002 akataura kuti Windows yaisazove injini inovimbika yeMicrosoft kana mitengo yadonha pazasi pemadhora mazana matatu nemakumi matatu uye ikozvino anoona kuhwina kweLinux sezvaakatumira pablog rake:
«Vagadziri veMicrosoft vava kuisa maficha muLinux kernel kugadzirisa WSL. Uye izvo zvinonongedzera kune inonakidza tekinoroji nongedzo. Chinhu pamusoro pemitambo ndechekuti ivo ndivo vanonyanya kudzvinyirira bvunzo yekukwanisika kune Windows yekuteedzera layer, zvakanyanya kupfuura bhizinesi software. Tingave tatova panguva apo Proton-senge tekinoroji yakanaka zvakakwana kumhanya Windows bhizinesi software paLinux. Kana zvisina kudaro, isu tichava munguva pfupi. Chechitatu-bato software vatengesi vanomira kutumira maWindows mabhinari vachida ELF mabhinari neiyo yakachena Linux API… uye Linux pakupedzisira inokunda iyo desktop desktop, kwete nekudzinga Windows, asi nekutora iyo. Pamwe izvi zvinogara zviri izvo zvazvaifanirwa kuve.»
Iwe unoziva kuti Eric S. Raymond dzimwe nguva ane nharo kwazvo mumifungo yake, saka iwe unogona kunge uri wekutonga kana ari iye akarurama kana kwete, sezvo dzimwe nyanzvi dzichifunga zvakasiyana, uye izvo ndezvekuti WSL inogona kutora kubva kuLinux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Eric Raymond anovimbisa izvozvo Windows 10 inozopedzisira yave yekuteedzera muLinux
Pasina kupokana, vateveri veLinux vanofara nezve izvi zvinogona kuenderana, nekuti software iyo yezvinhu zvevashandi inongoshanda muWindows, inogona kushanda muPenguin yedu inodiwa, pasina kutimanikidza kuva nehurongwa hwakaisirwa iyo, kunyangwe hove dzese dzinoenda ne kuyerera kune, hazvifadze kuvhura sosi vadikani.